Kuthungathwa umfana omncane olahlekile | Scrolla Izindaba
Kuthungathwa umfana omncane olahlekile
Umphakathi wasedolobheni elisogwini lwase-Namibia i-Lüderitz, wenqabile ukulahla ithemba njengoba usaqhubeka nokuthungatha umfana oneminyaka emine owalahleka ezinsukwini ezintathu ngemuva kukaKhisimusi nangesonto ngaphambi kosuku lokuzalwa kwakhe.
USpencer Mandela Nakale ugcine ukubonakala kubo kamamncane wakhe, lapho ayevakashele khona ngamaholidi.
Kusukela lapho umphakathi wendawo ubumbene ukuthungatha wonke amakhona endawo azungezile ukuthola umfana olahlekile.
Ngesonto eledlule, bahlome ngezikele, imimese, kanye nezinye izikhali ezibukhali, ase amalungu omphakathi agawula umhlanga ngase-Wesco Engineering Services ngethemba lokuthola ingane kaNelson Mandela Nakale noJulia Ndayaalako. Namuhlanje bathungathe emihumeni ngenhla kwezindawo ezimbili zokukhiqiza izinhlanzi edolobheni.
URonaldo de Klerk ubaba wezingane ezine, ubambe iqhaza elikhulu ekuqoqeni abantu abazosiza kanye nemishini yokucinga.
UDe Klerk kanye namaphoyisa bachithe amahora amaningi esikebheni senjoloba e-Atlantic Ocean ngeledlule bethungatha uSpencer ngemuva kokuthi inja yamaphoyisa ihogele umoya wephunga lakhe eduze nolwandle i-Airplane.
Ubaba kaSpencer utshele iphephandaba lase-Namibia ngesonto eledlule ukuthi, usenethemba lokuthi indodana yakhe izobuya iphilile.
Echaza ngokubukeka kwendodana yakhe, ubaba wakhe uthe: “Unesibazi ngaphakathi emlenzeni ongezansi asithola engozini abe nayo ngonyaka odlule. UMandela ubuye abizwe ngegama elithi Mbushe futhi mude ngaphezu kweminyaka yakhe. Cishe mude njengomntwana oneminyaka emihlanu.”
USpencer ubeneminyaka emithathu ngesikhathi eduka kodwa uhlanganise iminyaka emine ngoLwesihlanu olwedlule.